Maxay Reer Galbeedku ka baran karaan dagaalka ay Aasiya kula jirto Coronavirus? - BBC News Somali
Image caption Qaar ka mid ah dalalka Aasiyaayaa la shegayaa inay cashir bari karaan dalalka galbeedka
Kiisaska xanuunka Coronavirus ee Galbeedka ayaa cirka isku shareeray, dalalka ayaana ku dhawaaqay tallaabooyin adag oo ay ku jiraan xiritaanka iskuullada iyo xayiraado kale.
Fayraska ayaa ka dillaacay dalal badan oo qaaradda Aasiya ku yaalla dhowr toddobaad kahor - qaarkood ayaana lagu ammaanay inay ka adkaadeen xanuunno kale oo hore uga dillaacay.
Tusaale ahaan, Singapore, Hong Kong iyo Taiwan ayaa dhammaantood hoos u dhigay kiisaska fayraska - inkastoo ay u dhow yihiin Dhulweynaha Shiinaha.
Maxay tahay waxyaabaha gaarka ah ee ay sameeyeen - ma waxaase jira casharro ay dalalka kale ka baran karaan iyaga?
Casharka koowaad: Dhab u qaado - degdegna wax uga qabo
Khubarrada caafimaadka ayaa isku raacay tallaabooyinkaas wax looga qabanayo fayraska - si baaxad leh u baar, karantiil dadka qaba xanuunka, bulshadana ku dhiirrigeli inay kala fogaadaan. Tallaabooyinkaas ayaa si kala duwan haatan uga hirgalay Galbeedka - balse farqiga weyn ayaa ah in dalal badan aysan degdeg wax uga qaban fayraska.
Lahaanshaha sawirka Nicholas Spanos
"UK iyo Mareykanku waxay lumiyeen fursad," sidaa waxaa yiri Tikki Pangestu, oo hore uga tirsanaa Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO). "Labo bilood ayay eegayeen waxa Shiinaha ka dhacay, welina waxaa jirta malada ah in 'Shiinuhu aad uga fog yahay oo aysan dalalkooda waxba ka dhaceynin'."
Shiinaha ayaa markii ugu horreysay warka fayraska la wadaagay WHO 3-kii December. Xilligaas lama xaqiijin inay dadku isku gudbin karaan, wax bandanna lagama aqoon fayraska, balse saddex maalmood gudahood Singapore, Taiwan iyo Hong Kong ayaa dhammaantood baaritaanno ka fuliyay xudduudahooda - Taiwan ayaa xitaa baaritaan ku sameyneysay rakaabka diyaaradaha ka imaanaya Wuhan kahor inta aysan diyaaradda ka soo deign.
Baaritaan dheeraad ah oo ay saynisyahannadu ku sameeyeen fayraska, waxaa caddaatay in xitaa dadka aysan calaamadaha ka muuqan ay faafin karaan fayraska. Sidaas darteed, baaritaanku waa muhiim.
Casharka labaad: Baaritaanka ka dhig mid ballaaran, lana awoodi karo
Kiisaska fayraska ee Kuuriyada Koofureed ayaa sare u kacay. Si kastaba, waxay si baaxad leh u fulisay baaritaanka fayraska - waxayna haatan baartay in ka badan 290,000 oo qof. Waxay maalintiiba fulisaa ilaa 10,000 oo baaritaan si bilaash ah.
Koofur Kuuriya waxaa u degsan hannaan wax looga qabto xanuunnada faafa, kaddib markii sanadkii 2015 uu ka dillaacay xanuun sambabbada ku dhaca kaas oo ay u dhinteen 35 qof.
Si taas ka duwan, Mareykanka ayaa daahiyay baaritaanka - ma jirin qalab baaritaan oo diyaar ahaa, dad badan ayayna ku adkaatay inay baaritaan helaan, qaali ayuuna ahaa. Kaddib ayaa la meel mariyay sharci ah in qof walba uu bilaash ku heli karo baaritaanka.
Dhanka kale, UK ayaa sheegtay in keliya dadka isbitaalka ku jira si joogto ah loo baari doono.
Taasina waxay adkeyneysaa in la ogaado dadka aysan weli ka muuqan calaamadaha fayraska.
Casharka saddexaad: Dabagal kaddibna karantiil
Keliya kuma filna in la baaro dadka qaba calaamadaha fayraska - in la dabagalo dadka ay xiriirka la sameeyeen ayaa sidoo kale muhiim ah.
Dalka Singapore, koox sirdoon ah ayaa dabagashay in ka badan 6,000 oo qof - iyagoo dadka ka dhex helaya muuqaallada CCTV, baaraya, kuna amraya inay is karantiilaan ilaa ay natiijadu ka kala caddaaneyso. Hong Kong, ayaa sidoo kale sameeyay.
Waxay sidoo kale sameeyeen hab lagu hubinayo in dadka lagu amray inay is karantiilaan ay guryaha ku nagaadaan. Hong Kong, dadka cusub ee soo gala ayaa lagu amraa inay gacanta ku xirtaan qalab koronto oo lagu ogaanayo dhaqdhaqaaqooda, halka Singapore, dadka lagu amray inay is karantiilaan dhowr jeer maalintii lala xiriiro loona sheego inay soo diraan sawirro caddeynaya halka ay ku sugan yihiin.
Singapore waxaa u degsan ganaax adag - oo ay ka mid tahay in xabsi uu muteysanayo qof walba oo ka soo horjeesta amarka is karantiilka.
Dalal badan oo Galbeedka ku yaalla ayay ku adag tahay inay sameeyaan tallaabooyinkaas oo kale, sababo la xiriira bulshada tirada badan iyo xornimada ballaaran ee ay dadku haystaan.
Casharka afaraad: In goor hore ay dadku kala fogaadaan
Kala fogaanshaha bulshada ayaa loo arkaa mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee wax looga qaban karo fayraska.
Balse marka la daahiyo qaaditaanka tallaabadaas, waxaa ka imaanaya dhibaato. Gobolka Wuhan, ee dalka Shiinaha, oo loo maleynayo inuu yahay halka uu fayrasku ka dillaacay, ilaa shan milyan oo qof ayaa ka tegay kahor inta aan la soo rogin inay dadku guryahooda ku nagaadaan. Tan ayaa horseedday inay dowladdu soo rogto tallaabadii ugu weyneyd ee karantiilka dadka inta la ogyahay taariikhda.
Talyaaniga iyo Spain ayaa lagu qasbay inay soo rogaan tallaabooyinka karantiilka kaddib markii kiisaska fayraska ay gaareen kumannaan. New York iyo California ayaa ku amray dadka inay guryaha joogaan, marka laga reebo inay baxaan marka ay wax soo iibsanayaan.
Image caption Magaalada Hong Kong, waddooyin badan ayaa hawanaya
Casharka shanaad: Dadka si fiican wax ugu sheeg
Shiinaha ayaa lagu cambaareeyay inaysan garowsan dillaacitaanka fayraska. Waxay oggolaatay isu kullamo siyaasadeed ee ballaaran ay ka dhacaan Wuhan iyadoo walaaca fayraska uu sii kordhayo. Dowladda ayaa ciqaabtay dhaqtar isku dayay inuu dadka u digo.
Waxaa kaddib lagu ammaanay inay si wax ku ool ah u yareysay faafitaanka fayraska, kaddib markii ay soo rogtay tallaabo adag oo karantiil ah.
Dalka Mareykanka, Madaxweyne Donald Trump ayaa ku khilaafay saraakiisha caafimaadka khatarta fayraska ka dillaacay dalkaas, iyo helitaanka qalabka baaritaanka ee la heli karo.
Casharka lixaad: Waxay sidoo kale ku xiran tahay dhaqanka dadka
Ma fududa in la iska dhoho sida ay dadka qaar qabaan in dadka Aasiya ay aad u tixgeliyaan amarrada dowladda. Hong Kong, aaminaadda ay shacabku ku qabaan dowladda way hooseysaa - waxaana billooyin ka socday dibadbaxyo dowladda looga soo horjeedo. Balse iyadoo ka mid ah magaalooyinka ugu bulshada badan dunida, ayay dad badan si mutadawacnimo ah isku karantiileen.
Dhammaan tallaabooyinkan maku filan yihiin la dagaallanka fayraska?
Khubarrada ayaa aaminsan in tallaabooyin adag oo ay dalalka Galbeedku soo rogaan ay wax ka tari karto faafitaanka fayraska. Balse, si ay taasi u sameeyaan waxay u baahan yihiin inay cashar ka bartaan Aasiya.
Mana cadda muddada uu sii jiraya fayraskan.
Image caption Magaalada Hong Kong 98% dadweynaha ayaa xirta maaskarada